News – Page 956 – Puntland Voice
Khasaaraha ka dhashay Dagaal iyo Duqeymo Galabta ilaa cawada ka dhacayay Muqdisho oo sii kordhaya.
Muqdisho (AB):-Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dagaalo iyo duqeymo ka dhacay Magaalada Muqdisho Galabta iyo ilaa cawada waxayna dadka ugu badani ku dhibaatoodeen gudaha suuqa Bakaaraha. Dagaalka oo qarxay galabta waqigii salaada casairka ayaa soo gaartay cawada fiidkii waxaana […]
Dagaalo iyo Duqeymo Madaafiic oo Galabta ka qarxay Magaalada Muqdisho
Muqdisho (AB):-_Iska hor imaad culus ayaa galabta ka qarxay wadada isku xirta isgoysyada Bakaaraha iyo Debka kaasoo u dhexeeya Ciidamada Dowlada KMG Soomaaliya iyo Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab. Dagaalka ayaa waxaa bar bar socda Duqeymo madaafiic oo intooda badan ay hoobanayaan […]
Shil Baabuur oo Maanta ka dhacay deegaanka Calamada ee duleedka degmada Afgooye.
Shil baaburu oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa Maanta duharadii ka dhacay duleedka degmada Afgooye halka lagu magacaabo calamada oo ay degan yihiin dadkii Muqdisho ka barakacay. 1 qof ayaa la sheegay inuu ku geeriyooday shilkaasi halka dad kale oo […]
Ciidamada Dowlada KMG oo Maanta ka sameeyay degmada Xamar jajab Howlgalo dad iyo walxaha qarxa lagu soo qabqabtay
Muqdisho (AB):-Askar ka tirsan kuwa Dowlada KMG Soomaaliya ayaa Maanta howlgalo ka sameeyay gudaha degmada Xamar jajab ee Gobolka Banaadir C/baasid Maxamed Xasan gudoomiyaha Xamar Jajab oo howlgalka kadib la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in l;agu soo qabtay miino aan […]
Soomaali u tahriibeysay dalka Koonfur Afrika oo lagu qab qabtay Dalka Kenya
Kwale (AB):-Askarta Boliiska Dallka Kenya gaar ahaan Magaalada Kwale ayaa gacanta ku dhigay Soomaali ay ku eedeeyeen inay u yahriibayeen Dalka Koonfur Afrika. Dadka Soomaalida ee la qabtay ayaa la sheegay inay tiro ahaan gaarayeen ilaa 30 qofood iyadoo lala […]
Maamulka Xisbul Islaam ee deegaanka Lafoole oo awaamiir dul dhigay Ganacsatada
Maamulka Ururka Xisbul Islaam ee ka jira Duleedka Magaalada Afgooye gara ahaan deegaanka Lafoole ayaa awaamiir cusub dul dhigay dadka ku ganacsada deegaankaasi. Amarkaani ayaa si gaar ah ugu socday dadka hareeraha laamiga ku gancsada waxaana la faray inay isaga […]
« Previous 1 … 954 955 956 957 958 … 1,022 Next »